MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 812
>Myo Myint Cho – Remembering Maung Thaw Ka
> မရှူံးခြင်းနှင့် မနိုင်ခြင်း မျိုးမြင့်ချို ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၀၉ ကျနော့် နားလည်ထားချက်အရ အကျဉ်းထောင်၊ တရားရုံး၊ ရဲနှင့် စစ်တပ်ဆိုသည်မှာ အုပ်ချူပ်သူများ၏ လူထုဖိနှိပ်ရေး ကိရိယာများသာ ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုတရားသည် မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်မှား၍ မည်သည့်နိုင်ငံများတွင်မှန်သည်ကို တပ်အပ်မပြောနိုင်သော်လည်း ဗမာပြည်တွင် မှန်ပါ သည်။ ကျနော် မှန်သည်ထင်၍ ပုန်ကန်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော် သူပုန်ဖြစ်သည်။ သူပုန်တိုင်း မင်းမျက်သင့်၏။ မင်းဒဏ်ရှ၏။ ကျနော်လည်း သင့်၏။ ရှ၏။ လည်မျိုပေါ်တုတ်တိုမရောက်ခြင်းနှင့် ရေတွင်အဖျောက်မခံရခြင်းအတွက် “ဘုရားသခင်”နှင့် “ကံ” ကို ကျေးဇူးတင်စရာ ကောင်းသည်ဟု ယခုအချိန်ထိမထင်မိပါ။ အင်းစိန်တောရတွင် သီတင်းသုံးဖူးတိုင်း “ရင်ခွဲတိုက်” ဟု ဆိုရုံနှင့် “ကြိုးတိုက်” ဒါမှမဟုတ် “၂ တိုက်”...
>ORatha – DASSK & Her 64
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၆၄ (မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ ဂုဏ်ပြု) သြရသ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
> (Danoke Pagoda after the recent collapse in June 2009) အပျက်အစီးပုံကြားထဲက ဓနုတ်စေတီ – ယခင် နာဂစ်အပြီး နှင့် ယခု ပြိုကျအပြီးမြင်ကွင်း မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၉ နာဂစ် ဖြစ်ပြီး ၁၀ ရက် ၀န်းကျင်အကြာ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရိုက်ကူးထားသည့် ဒလ မြို့နယ် ဓနုတ်စေတီတော် မြင်ကွင်းများ ဖြစ်သည်။ နာဂစ်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည့် ဓနုတ်ရွာသူရွာသားများအား ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ စုပေါင်းသွားရောက်ပြီး အမိုးအကာ ပလပ်စတစ်စ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်၊ရေသန့်ဗူးများနှင့် အခြားစားစရာများ သွားရောက် ပေးလှူခဲ့စဉ် မြင်တွေ့ရသည့် ဓနုတ်စေတီ ဖြစ်သည်။ နာဂစ်ဒဏ်ကြောင့် ဓနုတ်စေတီ၏...
> Cartton Maung Yit – Dare to Free DASSK ? Challenge to the Junta No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Aw – DASSK 64 Poems
> ငြိမ်းချမ်းရေး ဒေါင်းမိခင် မောင်သြ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၀၉ (ဒီမိုကရေစီ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့သို့) မေတ္တာရှင် ကြည်လင်စမ်းရေ အလား သူ့ရင်ခွင် အေးမြရိပ် စိတ်ချမ်းမြေ့စေသား။ ငြိမ်းချမ်းရေး အို မိခင် ပြုံးရွှင်ပ နှလုံးသား မိုးကောင်းကင် ကြယ်တမွတ် ဆွတ်နိုင်မယ့် အား။ ငြိမ်းချမ်းရေး အို မိခင် သန့်စင်မြ နှလုံးသား ကမ္ဘာမြေ နေခြည်ဝင်း လင်းလက်မယ့် အား။ ငွေစင်ကြယ် ၀န်းရံခ လမင်းနှင့် ပြိုင်ကာ သူ့မေတ္တာ ဂုဏ်ရောင်လင်း ထုံသင်းပျံ့စွာ မြန်မာဟေ့ မြန်မာ ကမ္ဘာမှာ တယောက်ထဲ။ မုန်တိုင်းဒဏ် ဘယ်လောက်ကြမ်းသော်လည်း ဒေါင်းမိခင် ကမ္ဘာလွှမ်းမယ် ပန်းပန်လျက်ပဲ။ ။...
>Burmese in LA support Free DASSK
> မြေပြန့်ရောက် တောင်ပေါ်သား စိုင်းခမ်းလိတ် အယ်လ်အေရောက်မြန်မာများ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံပါ တီရှပ်များ ၀တ်ဆင်ကြ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉ ယမန်နေ့က အယ်အေမြို့ အဇူဇာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နိဗ္ဗာန်ဈေးမြေပြန့်ရောက် တောင်ပေါ်သား စိုင်းခမ်းလိတ် ပွဲတော်တွင် မြန်မာမိသားစု အတော်များများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံပါ တီရှပ်များ ၀တ်ဆင်ထားကြသည်ကို တွေ့ကြရသည်။ ဈေးရောင်းပွဲတွင် အချို့ဈေးဆိုင်များက ဒေါ်စု ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ် ပန်းချီပုံပါ တီရှပ်များကို ရောင်းချကြရာ ထိုတီရှပ်များကို ၀ယ်ယူကြပြီး ချက်ချင်း ၀တ်ဆင်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ယခင် မေလဆန်းကတည်းကစတင်ပြီး စစ်အုပ်စုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆို၍ အင်းစိန်ထောင်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်ကို မြန်မာပြည်သူများသာမက နိုင်ငံတကာက မိသားစုများအားလုံးက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြလျက်ရှိရာ ယခုကဲ့သို့ မြန်မာများ စုဝေးရာပွဲလမ်းသဘင်တို့တွင်...
>Maung Swan Yi – Birthday poem for DASSK, children poem
> ဒို့မေမေစု ဒို့ဒေါ်လေးစု မွေးနေ့ဆုတောင်း (ဒေါ်စုမွေးနေ့မှာ ကလေးများ ရွတ်ဆိုစရာ) မောင်စွမ်းရည် ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉ မေမေစုကြည်၊ ဒို့စုကြည် ဆန်းရဲ့သမီး ဆန်းစုကြည် ဇာနည်ဘွားမို့ စွန့်စားသည်။ နှင်းဆီနီနီ ပန်းတပွင့် လန်းလန်းစွင့်စွင့် အနီရင့် ခွပ်ဒေါင်းကြယ်ဖြု လူလူလွှင့်။ ရဲရဲရင့်ရင့်၊ မြင့်မြင့်ကြံ ညီညွတ်ကြရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရန် တွေ့ရန် ဆုံရန် ညှိနှိုင်းရန်။ လမ်းမှန်ကိုဖောက်၊ ရှေ့ကလျှောက် ခေါင်းဆောင်ဂုဏ်မြောက်၊ ရဲရဲတောက် မခ သူ့အောက်၊ လက်မမြှောက်။ မဖောက် မဖည် ညီကြမည် ပြည်ထောင်စုသစ်၊ ခေတ်သစ်တည် ဒုတိယပင်လုံ၊ ဆုံကြမည်။ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး အားလုံးအရေး ဒို့အရေး လူသစ် စိတ်သစ် အားသစ်မွေး။ ယဉ်ကျေးကြစေ၊ ရဲရင့်စေ ဖြောင့်စေ...
>Lu Min withareal snake
> မြွေအစစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတဲ့ လူမင်းဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉ သရုပ်ဆောင် လူမင်းသည် မေမြို့တွင် တလခွဲကြာ သွားရောက်နေထိုင်ပြီး ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်းများ ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်က တောကြီးမြွေဟောက် အစစ်ဖြင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့ထုတ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသည်။ (ဓာတ်ပုံ – ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် ) No tags for this post. Related posts No related posts.
>is Gyauk Jet on the right way?
> ဂျောက်ဂျက် ယဉ်ကျေးတော့မည်ဟု ဆိုဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉ဘယ်လက်ဖြင့် လေးစားဟန် ပြုနေသော အဆိုတော် ဂျောက်ဂျက် “သီချင်းရေးတဲ့အခါ အရင်လို တခြားသူကို တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ မရေးတော့ပါဘူး။ လတ်တလော ခံစားချက် ဖြစ်တဲ့ အချစ်အကြောင်း၊ လူမှုဘ၀ အကြောင်းတွေကိုပဲ ရိုးစင်းစွာ ရေးဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဟစ်ဟော့ အဆိုတော် ဂျောက်ဂျက်၏ ပြောကြားချက်ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ထုတ် နံနက်ခင်း ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဂျောက်ဂျက်သည် ညစ်ညမ်းစာသားပါဝင်သည် သီချင်းများ ရေးဖွဲ့ သီဆိုမှုကြောင့် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ စီးရီးထုတ်ခြင်းများ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရဖူးသည်။ ယခုအခါ ပိတ်ပင်မှုများ ရုပ်သိမ်းသွားပြီဟု ဆိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ – နံနက်ခင်းဂျာနယ် ) No tags for this...
>DKBA gets3KNU camps
> DKBA က KNU တပ်ရင်း သုံးနေရာသို့ ဝင်ရောက်၊ တပ်ရင်းတနေရာကို မီးရှို့ခဲ့နန်းဖော့ဂေ (ကေအိုင်စီ)ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉KNLA တပ်ရင်း(၂၁)မှ နေအိမ်တလုံး မီးလောင်ကျွမ်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကေအိုင်စီ) တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA)သည် ဇွန်လ (၁၄)ရက်နေ့က ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) တပ်မဟာ (၇) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ၃ ရင်း နေရာသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တပ်ရင်း(၂၁) စခန်း နေရာကို ဝင်ရောက် မီးရှို့ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုနေ့ မွန်းလွဲ (၂)နာရီခန့်တွင် KNLA တပ်ရင်း (၂၂)၊ တပ်ရင်း(၁ဝ၁) နှင့် DKBA (၉၉၉) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နာရီဝက်ခန့်ကြာ...
>Burmese soccer teams go online
> ဘောလုံးအသင်းများ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်ပြီမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၀၉ မြန်မာပြည်မှ ကြေးစား ဘောလုံးအသင်းများက ခေတ်သစ်နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့အသင်း ထင်ရှားရေး၊ ပရိသတ်နှင့် ပိုမိုထိတွေ့ခွင့်ရရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် ယူနိုက်တက် FC အသင်းက http://ygnutd.com ကိုလည်းကောင်း၊ ကမ္ဘောဇ FC အသင်းက http://www.kbzfc.com ကို လည်းကောင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာများ အသီးသီး ဖန်တီးထားကြသည်။ ကြေးစားဘောလုံးအသင်းများ သို့မဟုတ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိ အသင်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို http://myanmarnationalleague.com တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယို တခုလည်း ဆူညံစွာ အလိုအလျောက် ပွင့်လာမည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၃ လခန့်မှ စ၍ ပုဂ္ဂလိက...
>14th June 2009 – MoeMaKa Radio
> ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ – မိုးမခရေဒီယို အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နဂါးနီ – ဦးပန်တျာ၊ သံစဉ်ရတနာ အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းများ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ပြုတေးထပ် ကြော်ငြာကဏ္ဍ ကိုယ်တိုင်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကဗျာ ဆစ်ဒနီတလွှား သတင်းစကား ငပွကြီး နအဖရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ – ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း ခြောက်ပစ်ကင်းများကို လွမ်းဆွတ်ခြင်း – ဇာတ်လမ်းပမာ အထူးကဏ္ဍ – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘ၀သမိုင်း တပိုင်းတစ – သံစဉ်ရတနာ စီစဉ်သူများ – ဦးပန်တျာ၊ မေရီ၊ သံစဉ်ရတနာ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Miseriable, the Burma
> အဆိုးသံသရာထဲက မြန်မာပြည် နိုင်လင်းအောင် ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉ အိမ်ပြန်မရောက်နိုင်သေးတဲ့ ခရီးသည်များ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ တလျှောက်မှာ သိမ်ဖြူလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း (ယခင် ခရစ်လမ်း) မီးပွိုင့်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း မီးပွိုင့် စတဲ့မီးပွိုင့်တွေ ဘယ်မီးပွိုင့်မှ မီးလင်းတာ မမြင်ရ။ ဘတ်စ်ကားများ၊ တက္ကစီများ နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ လမ်းဆုံမှာ ကားတွေ တစီးနဲ့တစီး ယှက်ရှယ်ကာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ သိမ်ဖြူလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်နားမှာတော့ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေပါတဲ့ ပါပလေကာကားက လမ်းဘေးရပ်ပြီး ဘတ်စကားတွေ ကုန်ပစ္စည်းတင်လာတဲ့ ဒိုင်နာကားတွေကို စစ်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေပါတယ်။ မီးမလာလို့ ရှုပ်ထွေးပြီး မလှုပ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ကားတန်းကို ရှင်းဖို့ လုံးဝစိတ်ဝင်စားပုံမပြပဲ၊ ထိုနေရာနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ...
>one more Guam?
> မြန်မာပြည်သား တို့အတွက် ဒုတိယ ဂူအမ်ကျွန်း လာပြီလားမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉Palau ကျွန်းနိုင်ငံ မြို့တော်ဟောင်း Koror တွင် ယနေ့ တွေ့ရသော မအေးအေးသန့် နှင့် မြန်မာပြည်သားများ။ (ဓာတ်ပုံ – AP) ယခင်က ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ဂူအမ်ကျွန်းသို့ အရောက်သွားပြီး နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် ရယူမှုများ ရေပန်းစားခဲ့သည်။ ယခုအခါ အလားတူ ကျွန်းတခု ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာပြီဟု ယူဆဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာပြည်သား ၁၁ ဦးသည် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ Palau ကျွန်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး ထိုမှတဆင့် သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခိုလှုံရန် စီစဉ်နေသည်ဟု www.mvarietynews.com ရှိ သတင်းတပုဒ်တွင်...
>Junta dismisses EU concerns over Karen refugees
> ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ဒုက္ခသည်များအတွက် စိုးရိမ်မှုကို စစ်အစိုးရ ပယ်ချAP သတင်းဌာနဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ အင်္ဂါနေ့က တပ် (Tak) ခရိုင်၊ သာဆောင်ယမ်း (Tha Song Yag) မြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော ဒုက္ခသည်များ (ဓာတ်ပုံ – AP) မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကရင်သူပုန် စစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မိသည်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို မြန်မာအစိုးရက ယနေ့ ပယ်ချလိုက်သည်။ တိုက်ပွဲများမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ထောင်နှင့်ချီသော တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးချိန်တွင် ထိုသို့ ပယ်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ထိုးစစ်များကြောင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား ၄၀၀၀ မက ၎င်းတို့၏ ဒေသကို စွန့်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့...
>electricity in Rangoon
> ရန်ကုန် လျှပ်စစ်မီး ထုံးစံအတိုင်းဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ရန်ကုန်မြို့ထုတ် ဂျာနယ်တစောင်တွင် ဖော်ပြထားသော အိမ်ခန်း ကြော်ငြာတခုတွင် ရန်ကုန်မြို့၏ လျှပ်စစ်မီး အခြေအနေကို တွေ့မြင်ရသည်။ ရန်ကုန်တွင် လျှပ်စစ်မီး လာချိန်မှာ နံနက် ၅ နာရီမှ ၁၁ နာရီခန့်အထိ၊ ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီခန့်အထိ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Ko Saw Nyein
> ဘဝမုန်တိုင်းကြားက ချစ်ပန်းပွင့်ဦး ဂီတနက်သန် ကိုစောညိန်းရန်ဝင်း (တောင်တံခါး)ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ “ ပွင့်ဦး ကြွေမှဖြင့်ကွယ် မပန်စေချင်ရက်တော့တယ် ” No tags for this post. Related posts No related posts.
>Burma and GPS
> GPS မြန်မာပြည်ကို ရောက်ပြီ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် မြို့ကြီးတချို့မှ ယာဉ်မောင်းသူများသည် အီလက်ထရွန်နစ် လမ်းညွှန်မြေပုံ အားကိုးဖြင့် လိုရာခရီးရောက်အောင် သွားလာနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း GPS စနစ် ထည့်သွင်းထားသည့် လက်ကိုင်ဖုန်း တလုံး လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ရှိ လက်ကိုင်ဖုန်း (မိုဘိုင်းဖုန်း) ရောင်းချသည့် ဆိုင်တချို့တွင် အဆိုပါ စနစ်ကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေပြီ ဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်မြေပုံ စမ်းသပ်လိုသူများအနေဖြင့် ဦးစွာ ကျပ်ငွေ သောင်းဂဏန်း အကုန်အကျ ခံပြီး မိမိ၏ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် GPS စနစ် ထည့်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်၊ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသည့်...
>Thandi Thuka Monastery open in Phoenix
> ဖီးနစ်မြို့ ၊ သန္တိသုခ ကျောင်းသစ် ရေစက်ချ မောင်အိုး ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ အာရီဇိုးနားပြည်နယ် ၊ ဖီးနစ်မြို့တွင် AMC (Arizona Meditation Center) အဖွဲ့က ဦးဆောင်လျှက်၊ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ အလှူရှင်များ ပူးပေါင်းကာ ဖော်ပြပါလိပ်စာ (1424 W.COCHISE DR ,PHOENIX ,AZ 85201) နေရာတွင် ကျောင်းသစ်တဆောင် ဝယ်ယူခဲ့ပြီး၊ သန္တိသုခကျောင်းအမည်ဖြင့်၊ ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့( မြန်မာနှစ် ၁၃၇၁ခုနှစ် နယုန်လဆန်း၇ရက်၊တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲ၊ ကျောင်းရေစက်ချပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ ဆရာတော်ဦးအဂ္ဂဓမ္မ ဦးထိပ်ထားကာ ဆရာတော်ဦးခေမာစာရနှင့် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ သီတင်းသုံး၊ သာသနာပြုရန် ရည်စူးလျှက် သံဃိကကျောင်းအမှတ်ဖြင့်...
>Cartoon Saw Ngo – People Power
> ကာတွန်းစောငို – ရှေ့မတိုးနဲ့ ပစ်သတ်လိုက်မယ်ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>U Win Tin reportedly charged
> ဦးဝင်းတင်ကို တရားစွဲဟု သတင်းထွက်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၆ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၀၈ ထောင်မှ ထွက်သည့်နေ့တွင် အကျဉ်းသား ၀တ်စုံဖြင့် တွေ့ရသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင် (photo: getty images) အာဏာပိုင်တို့က ဦးဝင်းတင်ကို အကျဉ်းသားဝတ်စုံ ပြန်လည် အပ်နှံရန် ပျက်ကွက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်ဟူသော သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။ ဦးဝင်းတင် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး ၉ လခန့် အကြာတွင် ဤသို့ သတင်းထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရားစွဲဆိုထားသည်ဟူသော သတင်းကို ကာယကံရှင် ဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင် ကြားသိရသော်လည်း အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။ “အာဏာပိုင်တွေက ဘာမှ တရားဝင် ပြောတာ မရှိပါဘူး” ဟု ဦးဝင်းတင် ပြောသည်။ သို့သော်လည်း ကြာသပတေးနေ့တွင်...
>Eain Thi poem on Win Tin
> အနာဂတ်ကို ပုံဖော်နေသော .. လက်အိမ်သီ (သာယာဝတီ)ဇွန် ၁၃၊ ၂ဝဝ၉ ဒါ… မတရားဘူးဒါ… မမှန်ကန်ဘူးဒါ… မမျှတဘူး လို့ အာဏာယူထား သူတို့ အားအရိုးသားဆုံး စွပ်စွဲပြီးတရားဖို့ မှန်ကန်ဖို့ မျှတဖို့ အပြီးသတ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ တရားတဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်မျှတတဲ့ရပ်တည်ချက်တွေပီပြင်စွာ ဆုပ်ကိုင်လျက်အရိုးသားဆုံး ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပဲတလှမ်းခြင်း လှမ်းရင်းအာဏာရှင်ကိုရဲဝံ့စွာ ရင်ဆိုင်နေတဲ့သူ…… ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအကျဉ်းသားဘဝနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းရင်းအသေ အချိန်တွေကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ ရှင်သန်စေပြီးအမှောင်ကို အံတုနိုင်ခဲ့တဲ့ငရဲခန်းတွေကို လှောင်ရယ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းသူ ….. ပြောတဲ့ စကားတွေက တာသွားလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေက အမှန်တရားစိန်ခေါ်မှုတွေကိုမတုန်လှုပ်ဘဲသူ့ အတွက် မဟုတ်တဲ့ မိမိအတွက် မဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေထဲဘဝကို နှစ်မြှုပ်အခမ်းနားဆုံး ခေတ်သစ်ကိုတည်ထောင်နေသူသူ….သူ….သူ သူ့ ကိုတကမ္ဘာလုံးက သိတယ်မြန်မာပြည်ကလဲ သိတယ်လူငယ်တွေကလဲ...
>DKBA soldier arrested in Thailand
> ထွက်ပြေးလာသည့် DKBA တဦး ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ် ဖမ်းဆီးမိကရင်သတင်းစဉ် (ကေအိုင်စီ) ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉ဒီကေဘီအေတပ်သား စောကျုကျူ (ဓာတ်ပုံ-ကေအိုင်စီ) ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲအတွင်းမှ ထွက်ပြေးလာသည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်ဖွဲ့ (DKBA)တပ်သားတဦးကို ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့တွင် ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးလိုက်သည်ဟု သိရသည်။ အသက် ၂ဝ ဝန်းကျင် အရွယ်ရှိ စောကျုကျူသည် KNLA ကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေသည့် DKBA တပ်မဟာ (၅၅၅)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦး ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ယန်းမြို့နယ်ရှိ မဲတရီ ကျေးရွာသို့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာရာမှ ဒေသခံ ထိုင်း ကာကွယ်ရေး...
>Hope Giver – Yukio Shige
> ချောက်ကမ်းပါးစွန်းမှ မျှော်လင့်ချက်ပေးသူ ကျော်ကျော်ဂျွန် ၁၃၊ ၂၀၀၉ (Tojinbo Cliffs) ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တိမ်တွေ ကင်းရှင်းပြီး ရာသီဥတု ကောင်းတဲ့နေ့၊ နေသာတဲ့ နေ့လိုမျိုးမှာ သူတို့ဟာ ထိုကျင်းပို(Tojinbo) ချောက်ကမ်းပါးပေါ်ကို လာကြတယ်။ သူတို့က လှပတဲ့ရှုခင်းကို လာကြည့်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကင်မရာလည်း ယူမလာကြဘူး၊ သူတို့က ခေါင်းကို အောက်စိုက်ရင်း ချောက်ကမ်းပါးရဲ့ ဟိုးအောက်ခြေကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် ယူကီးအိုရှီဂဲ(Yukio Shige) လို့ ခေါ်တဲ့လူဟာ အဲဒီချောက်ကမ်းပါးကို ရောက်လာကြတဲ့ လူတွေဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး ရိုးရိုးလေးပဲ ‘ဟဲလို’ သို့မဟုတ် အပြုံးလေး တစ်ခုနဲ့ စပြီး နှုတ်ဆက်တတ်တယ်။ ရှီဂဲက အဲဒီလူတွေကို ဘယ်က လာသလဲ၊...
>Burmese Activists to hand six hundred thousand over signature to UN’s Ban Ki Mon for fee Burma
> အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ် ၆ သိန်းကို ကုလ-ဘန်ကီမွန်းထံ လက်ရောက်ပေးအပ်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုက စုဆောင်း ရရှိထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးကို နိုင်ငံတကာ မိသားစုများက ၀ိုင်းဝန်း လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုထားသည့် လက်မှတ်ပေါင်း ၆ သိန်းကို ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်တွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို ဦးတည်ပြီး ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အေအေပီပီ ခေါ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့က ကြေညာချက် တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုအခမ်းအနားကို အေအေပီပီ အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်...
>Myo Myint Cho – One of Thoese People – Poem
> သူလိုကိုယ်လိုကောင် မျိုးမြင့်ချို ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၀၉ ဘဝမှာ ပြောစရာ များများစားစားမရှိပါဘူး။ သူလိုကိုယ်လို ထောင်လေးဘာလေးကျဖူးတယ်၊ သူလိုကိုယ်လို တော်လှန်ရေး ဘာညာပြောတယ၊် သူလိုကိုယ်လို လက်မထောင်တယ်၊ သူလိုကိုယ်လို နိမ့်ရာကို လှံစိုက်တယ် ၊ သူလိုကိုယ်လို ဟင်းဖတ်လည်း ပါပါ ပေးတယ်၊ သူလိုကိုယ်လို ပါးလည်းပြောင်တယ်၊ သူလိုကိုယ်လို ပျော့ညံ့တယ် ပျော့ပျောင်းတယ်၊ သူလိုကိုယ်လို တည်ငြိမ်တယ် တွေဝေတယ် ၊ သူလိုကိုယ်လို ကာလာမသုတ္တံနဲ့ ၊ဝိဘဇ္ဇဝါဒကို ကြိုက်တယ်၊ သူလိုကိုယ်လို ဥခွံဟောင်းနဲ့ ကလီရှေးကို နှစ်ခြိုက်တယ် ၊ သူလိုကိုယ်လို ပိယေဟ ဝိပယောဂေါ ဒုက္ခော၊ သူလိုကိုယ်လို အပိယေဟိ သံမယုတ္တကော ဒုက္ခော။ သူလိုကိုယ်လို သူလိုကိုယ်လိုနဲ့ သူလိုကိုယ်လိုတွေချည်းပါပဲ ။...
>June 12, Infront of Insein Prison
> ယနေ့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ အခြေအနေ မိုးမခအထောက်တော်၊ ရန်ကုန် ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉ ယနေ့ အင်းစိန်ထောင် အနီး တစ်ဝိုက် လုံခြုံရေး အခြေ အနေသည် ယခင်ကထက် ပိုမို တင်းကျပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အင်းစိန်ပန်းခြံရှေ့နှင့် အင်းစိန် ဂုံးတံတား အတက် နေရာများတွင် သံဆူးကြိုး အတားအဆီးများ ကာရံထားပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲများ နှင့် အတူ လက်နက်ကိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အပြည့် တင်ဆောင်ထားသည့် ရဲကား ခုနစ်စီးခန့် နေရာယူထားသည်။ အင်းစိန် ကုန်းကျော်တံတား အဆင်း (အင်းစိန်ဈေးဘက်) မှ စတင်ကာ ကားခေါင်းခန်းတွင် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးစီ ပါဝင်သော လုံထိန်းကား အပြာများ ငါးစီးစီ လမ်း တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ နေရာယူုထားကြသည်။...
>Cartoon Maung Yit – Burmese Regime’s UG movement
> Cartoon Maung Yit – Burmese Regime’s UG movement June 12, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
>North Korean in Burma
> ရေမီး အပြည့်အစုံ လျှို့ဝှက် လှိုင်ခေါင်းကြီးများဓာတ်ပုံသတင်းဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉နေပြည်တော် နှင့် တောင်ကြီးမြို့ တို့တွင် မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် မြေအောက် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ တည်ဆောက်နေခြင်းကို ဓာတ်ပုံများနှင့် တကွ Yale Global Online မဂ္ဂဇင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။ လိုဏ်ခေါင်းများကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုရန်မှ ကာကွယ် နိုင်စေရန် တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ လူထု အုံကြွမှုကြီး ထပ်မံ ပေါ်ပေါက်လာပါက ပုန်းခိုရန် စီမံထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆောင်းပါးရှင် ဘားတီးလ် လစ်တနာ က သုံးသပ်ထားသည်။ ၁၀ ဘီး တပ် ကုန်တင်ကားကြီးတွေ ကောင်းစွာ သွားလာနိုင်သည်အထိ ကြီးမားပြီး နံရံ နှင့် အမိုး တို့ကိုလည်း တစ်ပေ...
>View in Rangoon by On the Road Journalist
> မြေပြန့်ရောက် တောင်ပေါ်သား စိုင်းခမ်းလိတ် ရန်ကုန်ရှုခင်း အမှတ် ၂ – ဇွန်လ လမ်းလျှောက်ဂျာနယ်လစ် ၊ ရန်ကုန် ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၉ နအဖက အမှုကို အချိန်ဆွဲနေပြီ မေလ ဆန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ကို ရေကူးပြီး ၀င်သူ ဂျွန်ယက်တော ကိစ္စကို အစနင်းပြီး နအဖက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ချဖို့ ကြံခဲ့ပါတယ်။ ယခု ရုံးတင်တရားစွဲဆိုမှုကို ကမ္ဘာ သမိုင်းတင်ခဲ့တဲ့ ကက်စထရိုကို ဘာတစ်စတာ အစိုးရက ရုံးတင်တဲ့အမှု၊ ရိုက်ခ်ျစတက် လွှတ်တော်ကို နာဇီတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ်မီးရှို့ပြီး နာဇီဆန့်ကျင်သူ ဒီမီထရော့ဗ်ကို ရုံးတင်တဲ့အမှု စတဲ့ကမ္ဘာကျော် တရားရုံးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တင်စား ပြောဆိုတာမျိုးလည်း ကြားနေရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကရော အိမ်နီးချင်း...
Page 812 of 902«1...810811812813814...902»
>fire destroys Mingalar Market (updated)
>BAWA host DASSK 65 at the bay
>How Far You can go under the Dictatorship of Burmes Regime
သာထက်အောင် - “ကျွန်တော်ဖျားတဲ့နေ့”
ရန်ကုန်ဓာတ်ပုံပွဲတော်က ဓါတ်ပုံပညာဒါန သင်တန်းများ ပို့ချမည်
လှကျော်ဇော ● ၂၁ ရာစုပိုးလမ်းမကြီးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ - အပိုင်း (၃)